Ny efitrano fampirantiana dia azo zaraina roa na telo arakaraka ny refin'ny fampirantiana.
Azonao atao ny mamorona ny habakao manokana amin'ny alàlan'ny fandaminana ireo takelaka fampirantiana karazana lalamby.Azo ampiasaina amin'ny tanjona isan-karazany toy ny fampirantiana sy lahateny izany.
Satria tsy rafitra tsy misy feona io, dia misy famerana arakaraka ny atin'ny fampiasana azy.Azafady mba zahao rehefa mandinika fampiasana hafa ankoatra ny fampirantiana, lahateny ary atrikasa.Tsy azo ampiasaina amin'ny feo avo toy ny fitendrena zavamaneno na karaoke. (Voafetra amin'ny BGM farafahakeliny.)
Tsy azo atao ny manova tanteraka ny antsipirian'ny kaonferansa, ny lahateny sns ho an'ny famaritana antoko.
Ny toerana ametrahana ny tontonana fampirantiana azo ovaina dia tsy azo ovaina amin'ny andro.
Ny mpandoko feo toa ny mikrô dia tsy azo ampiasaina amin'ny fampirantiana.
Azo atao koa ny mampifandray ny efitrano kely sy ny efitrano fampirantiana (fampiasana miharo). (Ilaina ny mindrana an'io sokajy io amin'ny andro iray ihany.)
Fahafahana / fitaovana
Takelaka fampirantiana 2.3 (W3.1 x H46m)
Mpanantona sary 200
Fampirantiana 100 sy ny hafa
* Raha sendra mampiasa fisarahana dia hiova ny isa.
Ampiasaina any am-pivoriana
Seza ihany: seza 400
Birao sy seza: seza 200
Andiana fitaovana audio (ao anatin'izany ny mikrôfona tsy misy tariby 3) sy ny hafa
Ireo izay mampiasa ny efitrano fampirantiana dia afaka mampiasa ny efitrano fanomanana maimaimpoana.
* Raha mizara ny efitrano fampirantiana dia zaraina amin'ny vondrona hafa.
Momba ny efitrano fanomanana efitrano fampirantiana
Momba ny pantry
* Tsy azo ampiasaina afa-tsy amin'ny fivoriana.
* Satria zaraina amin'ny efitrano kely izy ity dia manaova famandrihana mialoha.
Masinina gilasy, sns.
* Koa satria zaraina amin'ny efi-trano izy io, dia tsy azo avela eo amin'ny toerany rehefa avy navoaka na nivoaka.
[Lamin'ny fampirantiana 1] Ny efitrano rehetra dia ampiasaina
Faritra: manodidina ny 338 metatra toradroa
Fanitarana tontonana fampiratiana: 138m eo ho eo
[Lamin'ny fampirantiana 2] Mizara roa
Efitra fampirantiana A
Faritra: manodidina ny 166 metatra toradroa
Fanitarana tontonana fampiratiana: 69m eo ho eo
Efitra fampirantiana B
Faritra: manodidina ny 171 metatra toradroa
[Lamin'ny fampirantiana 3] Ampiasao amin'ny fizarana XNUMX
Efitra fampirantiana 1
Faritra: manodidina ny 83 metatra toradroa
Fanitarana tontonana fampiratiana: 40m eo ho eo
Efitra fampirantiana 2
Sahabo ho 166 metatra toradroa
Fanitarana tontonana fampiratiana: 62m eo ho eo
Efitra fampirantiana 3
Sahabo ho 88 metatra toradroa
[Lamin'ny fivoriana] Lahateny / atrikasa (mampiasa fivoriana)
Faritra: 362 metatra toradroa
Ny fampiasana tontolo andro ihany 28,000 / 28,000
Mizara roa (A / B)
Mizara ho XNUMX (XNUMX)
Ny fampiasana tontolo andro ihany 33,600 / 33,600
Efitra fampirantiana (fihaonana) Lisitry ny saram-pampiasana fitaovana / fitaovana anilila
Efitra fampirantiana (fampirantiana) Lisitry ny saram-pampiasana fitaovana / fitaovam-panampiana